५ वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल - Everest Dainik - News from Nepal
५ वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल
काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाल ५ वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल पुगेको छ । नेपालले शनिबार बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा भएको खेलमा बंगलादेशलाई २–० ले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलको बाटो तय गरेको हो । जितसँगै नेपाल समूह ए को बिजेता पनि बन्यो ।
नेपालको लागि सेमिफाइनल पुग्न यो जित अनिवार्य थियो । पाकिस्तान विरुद्ध सुरुको पहिलो खेल गुमाएर ठूलो दबाबमा आएको नेपालले त्यस यताका दुई खेल जितेर प्रतियोगितामै उत्कृष्ट पुनरागमन गर्‍यो । नेपालको जितमा ३३ औं मिनेटमा बिमल घर्तीमगर र ९० औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले गोल गरे ।
याे पनि पढ्नुस नेपाललार्इ चाैथाे सफलता, सन्दीपले लिए दुई विकेट
नेपाल साफ च्यम्पियनसिपको इतिहासमा सेमिफाइनल पुगेको यो चौथोपटक हो । यसअघि सेमिफाइनल पुगेको तीन उपलब्धि विदेशी प्रशिक्षकको नेतृत्वमा प्राप्त भएको थियो ।
यसपल्ट नेपाली प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले यो उपलब्धि हात पारेका छन् । विदेशी प्रशिक्षकमा सन् १९९९ मा जर्मनका फ्राङ्क स्टेप्लर, २०११ मा इंग्ल्यान्डका ग्राहम रोबर्टस् र २०१३ मा प्युटोरिकोका ज्याक स्टेफेनोस्कीले नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलसम्म पुर्‍याएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस विदेशी टोली नेपालमा एकदिवसीय क्रिकेट खेल्न इच्छुक: पारस खड्का
नेपालले अब सेमिफाइनलामा खेल्ने प्रतिद्वन्द्वीको निर्णय आइतबार भारत र माल्दिभ्सबीच हुने खेलले गर्ने छ । खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
रुखको हाँगा भाँच्चिएर लाग्दा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
विवाहित पुरुषप्रति किन मरिहत्ते गर्छन् महिला ?
सलह भगाउन टिन र थाल ठटाउँदै
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित संख्या ३५६ पुग्यो
कोरोनाको स्रोत खोजी गर्दै डब्लुएचओको टोली चीनमा
यातायात सञ्चालन गर्दा कुन मापदण्ड अपनाउने ? कसरी सुरक्षित हुने ? पढ्नुस् यी २० सुझाव
नेकपा विवादः अन्त्य कि स्थगित ? यसरी हुँदैछ सहमति